Ahlusuna oo soo dhaweysay ciidamada amisom ee la keenayo gobolada dhexe – SBC
Ahlusuna oo soo dhaweysay ciidamada amisom ee la keenayo gobolada dhexe
Posted by Webmaster on Maarso 17, 2012 Comments
Maamulka Ahlusuna Waljamaaca ee gobolada Dhexe ee Dalka ayaa soo dhaweeyay War dhowaan soo baxay oo ku aadanaa in ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Dowlada Jabuuti ay ka howlgali doonaan Gobolada Dhexe ee dalka .
Gudoomiyaha Gudiga Fulinta Maamulka Ahlusuna waljamaca Sh Maxamed Yuusuf Xeefoow oo maalintii shalay dib ugu laabtay gobolka galgaduud ka dib kulamo iyo safari uu ugu maqnaa, Dalka Ingiriiska, Magaalada Muqdisho iyo Magaalada Garoowe ee Puntland ayaa hadalkan saxaafada u sheegay.
Waxaa kale oo uu sheegay in Ahlusuna Waljamaaca ay siweyn ugu soo dhaweyneyso deegaanadeeda Siyaasiyiinta, Culimaaudiinka, hay’adaha, ururada Bulshada iyo dhamaan cidkasta oo aan wax u dhimeyn amaanka iyo xasiloonida deegaanada Maamulka Ahlusuna waljamaca kana qeyb qaadanaya sidii kor loogu qaadi lahaa.
Maamulka Ahlusuna waljamaaca ayaa ah markii ugu horeysay oo ay siweyn uga hadlaan arinta ciidamada Amisom ee dalka ku sugan in ay ka howlgalaan deegaanada kale ee ka baxsan Gobolka Banaadir.
Waxaa uu u sheegay Sh Xeefoow oo hadalkiisii wata Mushtamaca soomaaliweyn ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud in ay ogaadaan in ciidamadaasi aysan waxba u dhimeyn ayna aheyn kuwo doonaya ka ahlusuna ahaan dhulbalaarsi iyo weliba waxyaalo kale,
Sikastoo ay ahaataba warar soo baxay dhowaan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Amisom qeybtood la doonayo in la geeyo deegaanada qaar oo ka tirsan gobolada Dhexe iyo Hiiraan kuwaasi oo halkaasi u tagay howlahooda nabad sugida.